Indasitiri ruzivo |
Ndeapi mabhizinesi chiyero chemhando yepamusoro CNC lathe vagadziri
Musoro: Ndeapi mabhizinesi ekumisikidza emhando yepamusoro CNC lathe vagadziri Mune yeCCC machining indasitiri, zvakajairwa CNC lathe yekugadzirisa vagadziri vanofarira kuita bhizinesi reakajairika aruminiyamu zvikamu kugadzira, zvikamu zvendarira kugadzira, uye zvimwe zvikamu, vanoramba kugamuchira bhizinesi rakadai, ...
Ichagara kwenguva yakareba sei munguva yechando
Nekutanga kweSino US kutengeserana kupesana, iyo indasitiri yekugadzirisa indasitiri, semamwe maindasitiri, yatanga mwaka unotonhora wehupfumi. Maindasitiri akasiyana akatemerwa mhedzisiro imwechete. Mabhizinesi ese haadi asi haabatsiri kubuda. Nhaurirano dzakadzokororwa dzehondo yekutengeserana yeSino US ...
Maitiro ekuita basa rakanaka mukudzoreredza sisitimu yekupisa pombi redhiyeta
Reflow soldering tekinoroji chinhu chakakosha kuita mukugadzirisa kweanopisa pombi redhiyeta. Kushandiswa reflow pokunamatidza michina mumunda zvemagetsi kugadzira indasitiri iri zvikuru kwazvo. Zvakanakira kuita uku ndezvekuti tembiricha iri nyore kudzora, iyo weld ...
Maitiro ekuziva emhando yepamusoro Hardware yekutsika zvikamu vagadziri, ndeapi ruzivo anofanirwa kutariswa kutarisisa
Maitiro ekuziva emhando yepamusoro simbi yekutsika zvikamu vagadziri inoshushikana kwazvo nevazhinji vagadziri. Chiyero che Hardware stamping zvikamu vagadziri vanobva pane imwe punchi kusvika kumazana emadhindaini. Iyo yakadzika indasitiri chikumbaridzo ndechimwe chezvikonzero cheiyo hombe hodhi yehodhi yekutsika chikamu ...
Musiyano pakati pevazhinji machining nzvimbo uye NC Yakakwira Yekumhanyisa Machining Center
Muchokwadi, hapana musiyano mukuru pakati peyakajairwa CNC machining Center uye iyo CNC yakakwira-inomhanya machining nzvimbo. Kunyanya kubva pakuonekwa kwemuchina chishandiso, hapana musiyano pakati peCCC-yekumhanyisa machining Center uye neyakajairika simba machining nzvimbo. Chii chinonzi int ...
Ndeupi musiyano pakati peyakajairika lathe kugadzirisa uye kusanganisa kudzora lathe kugadzira
Ndeupi musiyano pakati peyakajairika lathe kugadzirisa uye kusanganisa kudzora lathe kugadzira Pakati pezvakawanda zvemakanika ekugadzirisa michina, yakajairwa lathe kugadzira iri zvakare imwe yemishini yekugadzirisa michina iyo yakagara kwenguva refu uye haina kubviswa. Iyo huru r ...
Maindasitiri yambiro nezve kudiwa kwemachina matarenda mune chaiyo CNC yekugadzirisa chirimwa
Vanhu vanga vachiita zvakaringana CNC kugadzira fekitori indasitiri kwemakore mazhinji vanofanirwa kuziva kuti iyo chaiyo CNC yekugadzirisa fekitori yainziwo komputa gong kugadzira fekitori pamberi. Muna 2000, vanhu vazhinji vaigara vachidaidza iyo chaiyo CNC kugadzira fekitori sekombuta ...
Prospect kuongororwa kwema mechanical kugadzirwa uye kugadzira indasitiri
Kubva pamaonero ehupfumi hwenyika, chinzvimbo chekugadzira michina uye kugadzirisa mune dzakasiyana nyika chakasiyana, asi nyika zhinji dzichiri kungoona kugadzirwa kwemishini uye kugadzirisa seyekutanga indasitiri yekugadzira yenyika. Nekuti iro rekutanga indasitiri yekugadzira mec ...
Maitiro ekugadzirisa zvine hungwaru uye mashandiro emagetsi zvikamu zvekugadzirisa zvebhizimusi mabhenefiti
Mune indasitiri yekugadzira, vagadziri vakapinda mukugadziriswa kwezvimishini zvikamu zvakanyanya kuomarara mukushanda uye manejimendi kupfuura izvo zviri muindasitiri yemagetsi, ayo ari emabhizinesi ane nharaunda isina hurombo uye yakaderera dzidzo kumashure. Zvikamu zvemishini zvinofanirwa sei ...
Mhinduro kumakina ekugadzirisa
Vanhu vanga vachiita zvemashini indasitiri kwemakore mazhinji vanowanzo sangana nazvo kuti mushure mekugadzira machira, saizi yechigadzirwa haigone kuvimbiswa uye haigone kuzadzikisa zvinodikanwa zvemadhirowa. Kazhinji, isu tinotsanangura ichi chiitiko semhedzisiro yekukanganisa kwemakina. Chigadzirwa kukwenya kwakakonzera ...
Zvakaoma kutora vanhu muindasitiri yekugadzira. Ko vanhu vaendepi
Munguva pfupi yapfuura, nekuuya kwegore idzva, indasitiri yemuchina iri kutarisana nedambudziko rekutora. Kana pasina odhiyo yekufunganya nezvayo, kune zvakare kunetsekana nezvekuva neodha, uye hakuna anoshanda. Ndiani achazviita? Ini ndinotenda iri izwi rehuwandu hwakawanda hwekugadzira mu ...
Isangano ripi rakasarudza epamusoro gumi ma radiator mabhii muGuangdong
Sezvo isu tese tichiziva, mune chero injini yekutsvaga, chero bedzi iwe ukaisa iwo gumi gumi emadhiredhi ematanho, pachave nemhedzisiro yakawanda, izvo zvinoita kuti vanhu vanoda kutsvaga mhinduro kuburikidza neiyi yakawanda isingabatsiri. Nei izvi? Parizvino, China yekugadzira indasitiri iri munzvimbo inotungamira mu ...